Ahoana ny fametrahana Office Online amin'ny Ubuntu 16.04 | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fametrahana Office Online amin'ny Ubuntu 16.04
Mpampiasa maro izay mifindra miala amin'ny Windows mankany Linux Tsy zatra mampiasa fonosana birao maimaimpoana misy izy ireo ankehitriny, na dia misy aza ny safidy hafa mahomby Office Ity dia mbola ampiasain'ny mpampiasa an-tapitrisany. Andro vitsivitsy lasa izay dia nanoratra taminay izy ireo nanontany anay hoe ahoana no ahafahan'izy ireo apetraho ny Office Online amin'ny Ubuntu 16.04 ka nitady izay fomba mora indrindra sy haingana indrindra hanaovana izany izahay.
Ity lesona manaraka ity dia hahafahantsika mametraka Office Online ao amin'ny Ubuntu 16.04 sy amin'ireo disro azo, mandeha ho azy ary miaraka amin'ireo fiankinan-doha ilaina rehetra, noho ny script tena tsara izay misy ny maody ilaina amin'ny Office Online mba hiasa tanteraka.
Office Online - Sary: Omicrono
Dingana tokony hametrahana Office Online amin'ny Ubuntu 16.04
Mety haharitra ora maromaro ny fizotrany, noho izany dia tsara ny mampiasa safidy hafa raha tsy mahery ny fanodinanao
Ny fizotry ny fametrahana an-tserasera Office Online amin'ny alàlan'ity script ity dia mety somary miadana, koa aza taitra ianao raha maharitra ny fametrahana.
Ny zavatra voalohany tsy maintsy ataontsika dia ny fandefasana ny fitoeram-bokatra manamboninahitra script
Avy eo dia mankany amin'ny lahatahiry vao klone isika ary manatanteraka ny .sh toy ny sudo
Raha vantany vao vita ny script dia ho afaka mankafy ny fampiharana rehetra ao amin'ny efitrano Office Online izahay, tsotra ny fizotrany ary raha misy fampitandremana sasany, azontsika atao ny tsy miraharaha azy ireo satria fonosana vitsivitsy azo esorina izy ireo.
Raha te hitantana ny serivisy izahay dia milaza amintsika ny mpanoratra an'ity script ity fa afaka manao izany amin'ny alàlan'ny systemd isika:
Ka noho io vahaolana tsotra io dia afaka mampiasa ny suite Office an-tserasera isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fametrahana Office Online amin'ny Ubuntu 16.04
tsy izany ve ny fisokafana ny office.com fotsiny avy amin'ny tranokala ary miafara?
Eny, misy ny olona maniry ny hampiditra ny automatisation biraony ao amin'ny rafitra fiasa ary ho azy ireo dia mahatsapa tena misy kokoa ho azy ireo noho ny manokatra azy amin'ny browser
Mamaly an'i jolt2bolt
Ity dia hametrahana libreoffice amin'ny Internet; S
Troisi dia hoy izy:
Tsy biraon'ny microsoft an-tserasera izy io, fa maimaim-poana amin'ny Internet. Ahoana ny famongorana?
Valiny amin'i Troisi
Alvaro rodriguez dia hoy izy:
Manana xubuntu 16.04 aho ary tsy mandeha amiko.
Valiny tamin'i Alvaro Rodriguez
Holazaiko aminao fa nanandrana nametraka azy tamin'ny milina virtoaly niaraka tamin'ny Ubuntu 16.04 aho. Tsy fantatro hoe hafiriana ny fametrahana azy, saingy mety mihoatra ny antsasak'adiny ...
Tsy fantatro izay ho valiny farany, saingy manoro hevitra an'i Lagarto aho mba hanome toro-hevitra momba ireo andinindininy kely ireo amin'ny lahatsoratra toa an'ity ... zatra amin'ny Linux ny fotoana fametrahana araka ny antonony ary, mazava ho azy, fohy kokoa noho io, ary, raha nahalala izy dia nilaozako nandritra ny fotoana fohy io rehefa nanana fotoana betsaka kokoa aho ... satria tena mahatezitra ny fametrahana!
Mitanisa am-bava izay nosoratako tao amin'ilay lahatsoratra aho tamin'izany
"Ny fizotry ny fametrahana an-tserasera an'ny Office Online amin'ny alàlan'ity script ity dia mety ho somary miadana, koa aza taitra ianao raha maharitra ny fametrahana."
Heveriko fa tsy tsikaritrareo ny fanilihana izay aseho ho toy ny hafatra an-tsoratra ao amin'ny kaody loharano amin'ilay script, izay azonao jerena amin'ny alàlan'ny tahiry navoaka tao amin'ity lahatsoratra ity:
"NY INSTALLATION DIA HATRANY VOLA LALANA, 2-8 ANDRO (Miankina amin'ny hafainganan'ny mpizara anao), ARY MAHARITSOA MBA AZONAO !!!"
Raha atao teny hafa, ny fametrahana dia afaka roa na valo ora. Fahatezerana, eny, fa ilay mampitandrina dia tsy mpamadika 😉
Tsy mahay miteny anglisy aho ary, na dia azoko tsara sy adika aza ny lahatsoratra resahinao, dia tsy mitsidika ireo karazan-pejy ireo aho matetika, satria tsy mamaky kaody loharano koa aho; Mpampiasa tsotra aho ary hitako fa fiteny vahiny izany. Izany hoe, tsy afaka nijery ilay "disclaimer" aho satria tsy niditra tamin'ny pejy repository, fa namaky ilay lahatsoratra, izay tsy afaka namintina ny lahatsoratr'izy ireo fa mety maharitra ora maromaro ny faharetan'ny fametrahana azy.
Nisy ny fampitandremana natao, ka tsy hanana olana ny mpampiasa amin'ny ho avy momba ny ora fametrahana
Lizard, tsy nanandrana niteraka resabe izy. Novakiako ny hevitra fa mety ho somary miadana ny fametrahana azy, saingy efa ora maromaro izany ary tsy vita ... antsasak'adiny dia toa fotoana be dia be mba hahafantarana ny fametrahana fa miadana tokoa, saingy amin'izao fotoana izao dia efa hallucinating! Adiny roa mahery no mbola tsy vita!
Averiko ihany, tsy nanandrana niteraka resabe aho, ary mazava ho azy fa ankasitrahana ny fizaranao ny fahalalanao tsy mahaliana anao, fa ny zavatra iray dia ny fametrahana kely miadana, ary ny iray hafa dia ny fametrahana izay ... mihoatra ny adiny roa !!! Baribariana izany! Ary mbola tsy misy fambara fa hifarana izany!
Mamaly ny tenako aho milaza aminao fa, farany, tsy maintsy nilavo lefona tamin'ny fametrahana Office Online aho, satria naharitra ela ny fametrahana ka voatery nanao asa iray aho namela ilay milina. Rehefa lasa aho dia efa adiny telo mahery izao. Rehefa niverina aho, rehefa afaka adiny efatra (ary ho fito, farafaharatsiny) nahita fifanakalozan-kevitra mitaky fanekena aho, efa nanaiky aho, saingy namerina lesoka izay tsy tadidiko ary tsy vita ny fametrahana. Manoloana ny scenario toy izany dia tsy tonga tato an-tsaiko mihitsy ny hanandrana azy io indray.
Ny latsa nataoko, izay tsy zava-dehibe, ary tsy mikasa hanelingelina olona aho, dia mifantoka fotsiny amin'ny fanitsiana ny famantarana momba ny ora fametrahana izay natao tao amin'ilay lahatsoratra, izay voalaza fa ny fizotry ny fametrahana «mety ho kely miadana ”, ary heveriko fa tsara kokoa ny manondro fa mety maharitra ora maromaro.
Ho ahy, raha manana eritreritra sarotra momba ny fotoana fametrahana aho dia tsy nanandrana akory ary hamonjy fotoana sy vola amin'ny faktioran-jiro. Izany hoe, amin'ny fiheverana fa miresaka fametrahana ora maro isika dia mieritreritra aho fa ara-drariny ny milaza fa mampitandrina azy mazava tsara ilay lahatsoratra.
Mazava ho azy, eny, ny mpanoratra no tsy maintsy manombana azy io, ny famantarana marimarina kokoa mety hamonjy ahy fotoana be dia be.
Microsoft Office ve no apetrakao? Ahoana ny fomba fiasan'ny fahazoan-dàlana?
Belux dia hoy izy:
Mampihomehy ny mahita fa mankany Linux izy ireo satria mankahala izay rehetra misy fofona toa an'i Microsoft, ary ny zavatra voalohany tadiavin'izy ireo ao anaty Linux dia ireo zavatra adaladala ireo sy ny fomba fametrahana divay, playonlinux, milina virtoaly misy sary Windows, izany hoe tian'izy ireo hihazakazaka ny distro-ny. MS rehetra.
Mamaly an'i Belux
Sigmund dia hoy izy:
Tsy toa antsika rehetra manao ny fanovana no toy izao. Raha ny amiko, noho ny asa dia tsy afaka mijanona mampiasa ny biraon'ny Microsoft aho. Ary koa, mila mampiasa programa hafa izay tsy manana kinova hafa maimaimpoana aho na, raha misy izy ireo dia tsy dia tsara toa ny namany ara-barotra. Ho fanampin'izay, misy ny olana amin'ny famoronana rakitra mifanaraka aminy mba hahafahana manitsy azy ireo amin'ny solosaina maro samihafa. Maritiora fa vita ny ezaka. Raha tokony hanompa, mianatra ary mahatakatra.
Mamaly an'i Sigmund
Viriatus dia hoy izy:
tsy afaka aho:
"Officeonline-install.sh: 293: officeonline-install.sh: Hadisoana Syntax: fanodinana tsy nampoizina"
Mamaly an'i viriato
boom dia hoy izy:
hampiasa # sudo ./officeonline-install.sh ianao
Valiny tamin'i Boom
Ahoana no fanesoranao ity zavatra ity? ary ahoana no hamafana ny lool an'ny mpampiasa
Ampidiriko ao amin'ny fanontanianao ... ahoana ny famafana azy?
Mandidy ny Arch Linux izay tokony ho fantatry ny mpampiasa anao rehetra